Talata, Desambra 20, 2005 Talata, Oktobra 21, 2014 Douglas Karr
Izaho dia niara-nilalao tamin'ny Microsoft Office androany ary namorona endrika iray izay halefa amin'ny API ary avereno avy eo ny valiny XML. Koa satria ny Office 2003 dia tafiditra ao anaty XML, dia nijery aho hoe ahoana no ahafahako mamaky mora foana ilay XML niverina mba hitahiry azy amin'ny latabatra na ny firaketana vonjimaika….
Tamin'izay no nahitako fa ny Microsof Office 2003 dia tafiditra tanteraka amin'ny XML (na MSXML) amin'ny alàlan'ny GUI (Graphical User Interface) fa TSY amin'ny alàlan'ny motera VBA (Visual Basic for Applications). Midika izany fa, na dia afaka mahazo ny valin'ny XML aza aho dia mila mampiasa kaody handefasana ny XML ary hiara-hiasa aminy.
Ny vinavinako dia ny olana dia ny VBA tena tsy niova hatramin'ny Visual Basic 6.
FANAMARIHANA HO AN'NY MICROSOFT: havaozy ny interface programanao rehefa mamoaka featurer ianao ao amin'ny Interface User Graphical! Geeez.
Tags: Microsoft OfficeVisual BasicVisual Basic ho an'ny fampiharana
Maninona no tsy mahomby ny indostrian'ny sarimihetsika
ASP RSS Parser, mpamaky sakafo